Muxuu ka yiri Luis Suarez ceybtii xalay kooxda Barcelona kasoo raacday garoonka Anfield??? – Gool FM
(Yurub) 08 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa qiray in saaxiibadiis ay kaga soo hor muuqdeen kulankii ay la ciyaareen Liverpool sida ciyaartoy yaryar oo kale.
Luis Suarez ayaa dhinaca kale tilmaamay inay sameeyeen markale isla qaladkii ay horey u sameeyeen mudo labo sano kahor, kaasoo uu ku sheegay inay tahay labo dhacdo xanuun badan ee isku xigta, isla markaana aan la rumeysan karin.
Kooxda Liverpool ayaa si mucjiso leh ugu gudubtay finalka Champions league kaddib markii ay 4-0 ay ku garaaceen Barcelona, oo kulankii lugtii hore ku soo badisay 3-0.
Suarez ayaa ciyaarta kaddib wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay dareenkiisa wuxuuna yiri:
“Waa inaan si xoogan u dhaleeceynaa nafteena, tani waa markii labaad oo isku xigta oo aan sameyneyno dhacdo isku mid ah, waxaana jira waxyaabo badan ee u baahan in la qiimeeyo isla markaana laga fikiro”.
“Ciyaartoyda ma ahan inay iska dhaadhiciyaan in tababaraha uu mas’uul ka yahay dhibaatadan dhacday, waa inaan raali galin bixinaa, waxaa nahay isla ciyaartoydii, macalinka wuxuu ku ciyaaray isla shaxdii, wuxuu isku dayay inuu wax uun u sameeyo naftiisa, waa inaan raali galin ka bixinaa qaab ciyaareedkeena iyo waxyaabaha ay taageerayaasha kulankan ku arkeen”.
Ugu dambeyn Luis Suarez ayaa ka hadlay goolkii 4-aad ee ka dhashay kooxdiisa, kaasoo ciyaartoyda Barcelona ay sameeyeen qalad aad u fool xun wuxuuna yiri:
“Goolkan wuxuu u muuqday sida inaan nahay ciyaartoy da’yarta ah, waxaan u baahannahay inaan u diyaargarowno dhaleeceynta naloo soo jeedin doono wixi xiligaan ka dambeeya”.